Amanyathelo okuthabatha ukuba afike kwiSikolo soMthetho
Ezinye Iingcebiso zokufaka isicelo kwiZikolo zoMthetho
Ukungena kwisikolo somthetho kunokuziva ngathi kuyinkqubo ebalulekileyo, ngakumbi ekuqaleni. Unokuziva ngathi ukhangele ngendlela ephakamileyo yeentaba ukunyuka. Kodwa ukutsalwa kwentaba kuqala ngesinyathelo esinye nje, ke omnye nomnye, kwaye ekugqibeleni, eloo nyathelo lithatha phezulu. Nazi ezimbalwa eziza kukukhokelela ekuvunyelweni kwesikolo somthetho.
Ubunzima: N / A
Ixesha elifunekayo: iminyaka engama-4+
Zonke izikolo zifuna ukuba ukungena kwabafundi kubambe ubuncinane i-bachelor degree. Kufuneka uhambe kwiikholeji efanelekileyo kakhulu kwaye ufezekise amabakala aphezulu. I-GPA yakho iya kuba yenye yezinto ezibalulekileyo ezibalulekileyo kwisicelo sakho, kodwa akudingeki ukuba wenze phambili kwi-prelaw.
Khetha iinqununu zezifundo eziphambili kunye nezifundo kwiindawo apho ucinga ukuba uya kuba ngaphezulu. Yenza umgca wendlela onokuyilungiselela ngayo kakuhle isikolo somthetho ngexesha leminyaka yakho engaphantsi.
Isibini sibaluleke kakhulu kwisicelo sakho sesikolo somthetho sisikolo sakho seLSAT. Ukuba ngoku ukholeji, amaxesha amahle kakhulu okuthatha i-LSAT ihlobo emva komnyaka wakho omtsha okanye ukuwa komnyaka wakho ophezulu. lixesha elifanelekileyo lokuthatha i-LSAT. Thatha ihlobo okanye uwele ngaphambi kokuwa ngexesha ofuna ukuqala isikolo somthetho ukuba sele usuphumelele.
Lungisa kakuhle uze uqiniseke ukuba ufunda ngendlela izikolo eziphatha ngayo amanqaku amaninzi e-LSAT phambi kokuba uthathe isigqibo sokubuyisela i-LSAT. Kufuneka ubhalise kunye ne- LSDAS ngeli xesha.
Khetha apho uza kusebenza khona.
Kukho izinto ezininzi omele uziqwalasele xa usenza isigqibo sokuba uza kufaka isicelo esikolweni somthetho. Cinga ngokuhambela izikolo ezithandayo-kwaye ukhokhe ubuncinane ukuqwalaselwa kwezikolo zemfundo .
Bhala ingxelo yakho.
Isitatimenti sakho somntu sifike kwisithathu esibalulekileyo emva kwesigaba sakho se-LSAT kunye ne-GPA yakho. Qala ngokucinga ngezinye izihlandlo zokubhala uze ubhale! Phando ngezinye iingcebiso zokubhala isitatimende somntu siqu , uqiniseke ukuba ugweme izihloko ezithile kunye neephene eziqhelekileyo.
Ukugqiba izicelo zakho ngaphambi komhla wokugqibela.
Qinisekisa ukucela iingcebiso ngokukhawuleza ukwenzela ukuba abavoti bakho baninzi ixesha lokubhala iincwadi ezivelele. Kwakhona, bhala nayiphi na ingxelo engaphezulu onokuyidingayo, efana ne "Kutheni X" ingxelo yeSikolo soMthetho kunye / okanye isongezelelo . Cela ukubhalwa kwaye uqinisekise ukuba zonke izikolo ezifunwa zizikolo zifunyenwe kwiifayile zakho zesicelo zilapho phambi kwangaphambi kokugqibela.
Emva kokuba ugqibile onke amanyathelo angentla apha ngendlela ehlelekile, unokuqiniseka ukuba uye wandisa amathuba akho okuya esikolweni somthetho. Umnqweno omhle
Qala ukulungiselela ukufaka izicelo kwizikolo zomthetho ngokukhawuleza xa usuqumile ukwenza njalo.
Musa ukulinda kude kube nomzuzu wokugqibela ukuthumela kwizicelo. Izikolo ezininzi zineenkqubo zokungeniswa kwemvume, oku kuthetha ukuba bayamkela abafundi kulo lonke inkqubo yokumkelwa.
Yiba nomntu oneliso elifanelekileyo malunga neenkcukacha zobungqina bepakethi yakho yepakethi yesicelo, ingakumbi yakho ingxelo.
Amanqaku e-World Amarekhodi ama-5000
Yenza Incwadi Yenkumbulo Yentsapho Yakho
Indlela yokufumana iVisa yabafundi kwiUnited States
Incwadi kaTracy Kidder malunga nokwakha indlu
I-Du'a: Imithandazo yama-Islamaic yobulelo ku-Allah
AmaSilamsi eMelika Ngexesha Lobugqila
Ekugqibeleni - Isikhokelo esicacileyo kwiBhayisike Sizing
IGrama Radiation Definition
Igalari yokuCinga nokuCala
Izizathu ezininzi zokuba ufuna ukuCamngca iSikolo esiPhandle
Amagama Ezizukulwana e-United States